Home » သတင်း » တိုက်ရိုက်ပရိတ်သတ်ထိတွေ့ဆက်ဆံ - အသင်းများ, ကစားသမား, ပရိသတ်များ NOW ကက -Want
တိုက်ရိုက်ပရိတ်သတ်ထိတွေ့ဆက်ဆံ - အသင်းများ, ကစားသမား, ပရိသတ်များ NOW ကက -Want
"အင်းငါယောက်ျားတွေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ဖူးပါဘူးငါသိ၏။ ဒါကြောင့်, သငျသညျအကြှနျုပျကို၎င်းတို့၏အမည်များကိုပြောပြရန်ရှိသည်လိမ့်မယ်, ပြီးတော့ငါအဖွဲ့သည်အပေါ်ကစားခြင်းရဲ့အဘယ်သူသည်ကိုသိပါလိမ့်မယ်။ "- ဖူးအငုံထွက် Costello, "အဆိုပါဆိုးကိုးဆယ်"Universal Pictures, 1945
ကျနော်တို့ကကြိုးဖြတ်နောက်ကျောမှီ, ကျနော်တို့ဖြစ်ကောင်းဘောလုံးနှင့်ဂေါက်သီးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျော်ထိတွေ့သူတို့ရဲ့ကျက်သရေ (နှင့်ပရိသတ်ကို) ဆုံးရှုံးခဲ့ကြပါလျှင်အံ့ဩကြ၏။ ပြီးနောက်ရှိသမျှတို့, ငါတို့သည်ငါတို့၏ကြီးတွေဆော့ဝဲအစုအဝေး၌ငါးဘောလုံးအချို့ဘေ့စ်ဘော, ဘောလုံးနှင့် NASCAR လိုင်းများအဖြစ်နှစ်ခုဂေါက်သီးလမ်းကြောင်းများရှိခဲ့ခြင်းနှင့်လူတိုင်းမညာဘက် ... တကယ်အားကစားပရိတ်သတ်ခဲ့သလဲ
အိုကေ, Super Bowl (အကြော်ငြာတွေကိုခစျြတ) နှင့်က Tiger Woods '' ငါးနှစ်တွင်ခြောက်သွေ့သောစာလုံးပေါင်းပြီးနောက်အဓိကပြိုင်ပွဲအနိုင်ရပြန်လာမယ့်များ၏အမြီးအဆုံးမပေးဤမျှလောက်သောထက်အခြားပေမယ်ဆွဲယူကြီးတွေဖြစ်ကြသည်။
IBC မှာ, အားကစားအသံလွှင့်ခြင်းနှင့်တိုက်ရိုက်သတင်းအခွင့်အလမ်းများအကြောင်းကိုသက်တမ်းတိုးစိတ်လှုပ်ရှားမှု, IP ကို-based OTT ကြည့်ရှု၏လျင်မြန်စွာကြီးထွားကျေးဇူးတင်ရှိ၏။
Futbol, ​​ဘောလုံး, ဘေ့စ်ဘော, ဘတ်စကက်ဘောအမြဲကွန်ယက်ကိုအမှုဆောင်အရာရှိ '' စိတ်နှလုံးထဲ၌တစ်ဦးနွေးရာအရပျခဲ့ကြပြီသူတို့ကြီးတွေကြော်ငြာဒေါ်လာယူဆောင်နှင့်ကျြဆနျသူတို့၏မျှတသောဝေစုထက်ပိုမိုရဲ့ဝန်ခံကြောင့်ကြကုန်အံ့။
ဂိမ်း Rehash - နောက်ဆုံးညနပေိုငျးရဲ့သို့မဟုတ်မနေ့ကရဲ့ဂိမ်း / အဖြစ်အပျက်၏ယနေ့ဖွင့်ရေအေးဆွေးနွေးမှုယခုအများအားဖြင့်က virtual ဖြစ်ပါတယ်နေစဉ်, ကဆဲပြိုင်ပွဲအကြောင်းပြောဆိုနှင့်ပြဇာတ်ပြန်ဖွင်ရန်အကြီးအ pastime ပါပဲ။
ထိုအခါ Ultra-အမြတ်အစွန်း PPV အတွက် (အမြင်နှုန်းလစာ) လက်ဝှေ့, ရောနှောကိုယ်ခံပညာများနှင့်နပန်းပြပွဲရှိခဲ့သည်။
သို့သော်မြင်းစီး, လှေလှော်, ခြံစည်းရိုး, ပုရစ်, ဟော်, စကိတ်ဘုတ်စီးခြင်း, မောင်းသူမဲ့လေယာဉ် / hotrod ပြိုင်ကားများကဲ့သို့အားကစားနှင့်နယ်ပယ်အားကစားတစ်ခုအလုံးအရင်း YouTube ပေါ်မှာသူတို့ကိုယ်သူတို့ရပျတညျမှထွက်ခွာခဲ့ကြသည်။ ဒါမှမဟုတ်သူတို့ကကံကောင်းခဲ့ကြပါလျှင်, ESPN + Hulu တိုက်ရိုက်သို့မဟုတ် Amazon ရဲ့မြင်ကွင်းစာကြည့်တိုက်တွင်ထည့်သွင်းခံရဖို့။
ဒါပေမယ့်အယ်လန် McLennan, PADEM Media Group ၏အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်အသင်းများ, အဖွဲ့ချုပ်တီဗီကွန်ယက်များ, ဒစ်ဂျစ်တယ်ကုမ္ပဏီများနှင့်ကစားသမားသူတို့ကိုယ်သူတို့အဆိုအရ OTT နှင့်အတူကမ္ဘာအဝှမ်းမှပရိတ်သတ်များနှင့်အတူချိတ်ဆက်ဖို့နည်းလမ်းသစ်တွေရှာဖွေနေကြသည်။
"အိုင်ပီကျော် streaming, ညာ Done, သူတို့ရဲ့ပရိသတ်ကိုတိုက်ရိုက်ဗီဒီယိုကပစ္စည်းကိုဆက်ကပ်ဖို့သူတို့ကိုဖွင့်ခြင်းဖြင့် MVPD ရဲ့များအတွက်သိသာထင်ရှားသောအသစ်များကို option ကိုကိုယ်စားပြုသည်" McLennan ကပြောပါတယ်။ "ဒါဟာ ADDED ဝင်ငွေအခွင့်အလမ်းများနှင့်အတူသူတို့ကိုထောက်ပံ့; နှင့်ပိုပြီးအရေးကြီးတာကတစ်ဦးပိုမိုနီးကပ်စွာဖောက်သည်ဆက်ဆံရေးမျိုး။
"ပွဲစပွန်ဆာအသင်းများနှင့်အားကစားသမားများ, ပိုပြီးစီးပွားရေးအရအလားအလာအကောင်းဆုံးအတွေ့အကြုံပို့ဆောင်အာရုံစိုက်နိုင်ပါတယ်" သူကအလေးပေးပြောကြားခဲ့သည်။ "ထိုတစ်ချိန်တည်းမှာအသစ်ဖြေရှင်းချက်နိမ့်အရည်အသွေးအကြောင်းအရာရောင်းတရားမဝင်လုပ်ငန်းများဆုံးရှုံးနိုင်ပါတယ်။
"အဆိုပါနည်းပညာများကိုရင့်ကျက်ပြီ, နှင့်ပိုပြီးအခုအချိန်မှာတပ်ဖြန့်လျက်ရှိသည်" သူကဆက်လက်ပြောကြားသည်။ "အိုင်ပီကျော်အားကစားအကြောင်းအရာ Streaming, အတိတ် linear တီဗီထက်ပိုမိုပါဝင်ဆောင်ရွက်ပိုပြီးအားလုံးပါဝင်နိုင်ခြင်းနှင့်နည်းလမ်းများစွာအတွက်အများကြီးပိုကောင်းစေနိုင်ပါတယ်။ ခန့်အပ်တာဝန်ပေးခြင်းတီဗီတစ် 50 နှစ်သမိုင်းရှိပါတယ်; ရုံနှစ်အနည်းငယ်အတွက် IP ကို-based ပေးပို့ပြီးသားကြည့်ရှုချင်သောအရာကိုပေးလှေကားတက်ရွေ့လျားနေသည် - သူတို့ချင်ပါတယ်ဘာပဲမျက်နှာပြင်သို့မဟုတ်စက်ပစ္စည်းပေါ်တွင်တိုက်ရိုက်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှု။ သော့ကိုမိတ်ဆက်နှင့်ကြောင့်ရွေးချယ်စရာသူတို့ကိုရှုတ်ထွေးမဟုတ်နေစဉ်ပရိသတ်များလိုအပ်ချက်ကိုက်ညီမယ့်လမ်းအတွက်ကြောင့်ပို့ဆောင်လိမ့်မည်။ "
တစ်ခုချင်းစီကိုတစ်ဦးကောင်းမွန်စွာ profiled ပရိသတ်ကို (နယ်ပယ်အားကစားပင်အဘယ်အရာကိုခဲ့ပါတယ်) ရှိပြီးသောကြောင့်, သူတို့ကသစ်ကိုစပွန်ဆာများနှင့်အမှုများစွာရှိကြော်ငြာထောက်ခံမှု (ဆိုလိုသည်မှာ, ဝင်ငွေ) ကိုပိုပြီးတန်ဖိုးအားပေးနေတဲ့အနေအထား၌ရှိကြ၏။
ကြော်ငြာ Shift - စားသုံးသူများပြောင်းလဲတဲ့အခါမှာ, ဒါကြောင့်ကြော်ငြာရှင်များလုပ်ပါ။ ပို. ပို. , စျေးကွက်ကြည့်ရှုသူများ '' အာရုံကိုဖမ်းယူအသစ်ချဉ်းကပ်မှုနှင့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်လိုအပ်ပါတယ်ထားတဲ့သူတို့ရဲ့မိုဘိုင်းဖန်သားပြင်ပေါ်မှာလူတွေမှမရရှိနိုင်ဖြစ်အကြောင်းအရာရွှေ့လာခဲ့သည်။
မကြာသေးမီကထင်ရှားကျော်ကြားလာခဲ့သည်အစီရင်ခံစာကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစားသုံးသူများ 60 ရာခိုင်နှုန်းကိုသူတို့နှောင့်နှေး, ကြားခံသို့မဟုတ်အခြားကိစ္စများကြည့်ရှုခြင်းမရှိဘဲ၎င်းတို့၏ရွေးချယ်မှုမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာပျော်မွေ့ဖို့အာမခံနိုင်လျှင်အွန်လိုင်းစောင့်ကြည့် (နှင့်ထိုသို့ပေးဆောင်) အားကစားချင်ပါတယ်ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
Cable ကို subscriber များအားကြိုး-ခုတ်ထက်ပို streaming များန်ဆောင်မှုအတွက်ပေးချေ။ ဝက် (59 ရာခိုင်နှုန်း) ထက်ပိုဝယ်လိုအားအပေါ်မှာအနည်းဆုံးဗွီဒီယိုတစ်ခု (VOD) ဝန်ဆောင်မှုစာရင်းသွင်း။
Non-cable ကို subscriber များအား 1.2 ဝန်ဆောင်မှုအတွက်ငွေပေးနေချိန်တွင် Cable ကို subscriber များအား, 0.7 streaming များန်ဆောင်မှုများ၏ပျမ်းမျှအဘို့အပေးဆောင်, အွန်လိုင်းဗီဒီယိုနှင့်အတူရိုးရာတီဗီလာကြပါတယ်။
အနှစ်တစ်ထောင်အွန်လိုင်းဗီဒီယိုမှကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပြောင်းလဲမှုဦးဆောင်လမ်းပြ။ ဖြေဆိုသူ 18-35 လက်ရှိထုတ်လွှင့်ထက်ပိုပြီးအွန်လိုင်းဗီဒီယိုကြည့်ရှုအသက်အရွယ်။ လူငယ်တို့အနှစ်တစ်ထောင် (အသက် 18-25) ခြောက်လနာရီ, ရိုးရာကို TV ၏ 13 မိနစ်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အွန်လိုင်းဗီဒီယိုအပတ်စဉ်ကိုးနာရီ-11 မိနစ်ပျမ်းမျှကြည့်ပါ။ ငယ်ရွယ်နှစ်တစ်ထောင်၏ 15 ရာခိုင်နှုန်းကအွန်လိုင်းဗီဒီယိုကိုကြည့် 20 နာရီတစ်ပတ်ထက်ပိုဖြုန်းနေကြတယ်။
စားသုံးသူများကြောင့်စျေးနှုန်းမြင့်တက်လာရန်မိမိတို့၏ဝန်ဆောင်မှုကိုပယ်ဖျက်ပါလိမ့်မယ်။ ပိုများသောကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်စားသုံးသူများ၏ထက်ဝက် (55 ရာခိုင်နှုန်း) ထက်စျေးနှုန်းတိုးတစ်ခု SVOD ဝန်ဆောင်မှုပယ်ဖျက်ဘို့အဓိကအကြောင်းရင်းဖြစ်ကြောင်းပြောကြသည်။ ထက်ဝက်နီးပါး (46 ရာခိုင်နှုန်း) ကသူတို့ cable ကိုစာရင်းပေးသွင်းခြင်းအတွက်တူညီတဲ့သတိပြုပါ။
အွန်လိုင်းကြည့်ရှုတိုင်းပြည်အားဖြင့်ကျယ်ပြန့်နေကြပါတယ်။ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာကြည့်ရှုသူများသည်ရှစ်နာရီကြာမှာအများဆုံးအွန်လိုင်းဗီဒီယို watch, 46 မိနစ်အပတ်တိုင်း, အိန္ဒိယနှင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတို့ကနီးကပ်စွာအပတ်တိုင်းကြည့်ရှုမှာနီးပါးရှစ်တစ်နှစ်ခွဲနာရီနောက်သို့လိုက်ကြ၏။ ဂျာမဏီငါးနာရီ, နှစ်မိနစ်မှာနိမ့်ဆုံးအွန်လိုင်းဗီဒီယိုကြည့်ရှုမှုနှုန်းမှာရှိပါတယ်။
McLennan အဆိုအရ, တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှအားကစားနှင့်ညှိထိတွေ့ဆက်ဆံမှု (မျိုးစုံကို devices များ) မီဒီယာစီးဆင်းမှုအတွက်အလျင်မြန်ဆုံးကြီးထွားလာအမျိုးအစားတချို့ရှိနေပါတယ်။
သောကြောင့်သက်သေပြ CDNs (အကြောင်းအရာပေးပို့ကွန်ရက်များ) ၏အဆင်သင့်ရရှိနိုင်မှုနှင့်အင်တာနက်ကိုနှင့် Wi-Fi ကိုနေရာအနှံ့ကြောင့်များစွာသောအသစ်ကအားကစားအဖွဲ့များကိုဖြစ်ရပ်များ, သမိုင်းဆိုင်ရာရူပနှင့်နောက်ကွယ်မှ-The-မြင်ကွင်းများ / တစ်ဦးနှင့်အတူပါဝင်သူအမြင်များဘို့မိမိတို့ကိုယ်ပိုင် channel များကိုတည်ထောင်စဉ်းစားနေကြတယ် အကြောင်းအရာကြံ့ခိုင်တန်းစီဇယား။
OTT Bandwidth - OTT ကြည့်ရှုရန်ချိန်းတီဗီကနေစားသုံးသူများ၏ရွှေ့ပြောင်းအလိုဆန္ဒများနှင့်တွေ့ဆုံရန်, ATSC နှင့် SMPTE ပိုပြီးထိထိရောက်ရောက်ဗီဒီယိုကိုအကြောင်းအရာမကယ်မလွှတ်နှင့်ပိုပြီးထိထိရောက်ရောက် DTC မယ်လို့သစ်ကိုစံတီထွင်ထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့သည်။ မိုဘိုင်းကြည့်ရှုစားသုံးသူပိုမိုဖမ်းယူဖို့, ဆက်သွယ်ရေးဝန်ဆောင်မှုကုမ္ပဏီများသည်အသုံးပြုသူများ '' ဒေတာများကိုအစီအစဉ်များနှင့် Wi-Fi ကိုအတူကြည့်ရှုအဘို့ပိုကောင်း bandwidth ကို performance ကိုပေးလိမ့်မည်သည့် 5G တီထွင်ထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့သည်။
HD, UHD, 4K / HDR ဗီဒီယိုနှင့်အားကစားပြီးသားအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ရလဒ်များကိုနှင့်အတူနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်လျက်ရှိသည်။
ထို့အပြင်ခုနှစ်, McLennan, အစောဆုံးအဆိုပါ OTT ရှိလူများနှင့် On-demand ပရိုဂရမ်းမင်းကိုလယ်တဖော်ပြထား, "SMPTE'' s ကို (Motion Picture & ရုပ်မြင်သံကြားအင်ဂျင်နီယာများ၏လူ့အဖွဲ့အစည်း) သည် ATSC (Advance ရုပ်မြင်သံကြားစနစ်များကော်မတီ) ကြရန်၏အကောင်းဆုံးအလုပ်အကိုင်အပြုတော်မူပြီတစ်ပြိုင်နက်နှင့်ချက်ချင်းလူသနျးပေါငျးမှကြည့်ရှုရောက်စေဖို့အသံလွှင့်မှုအတွက် optimized ထားပြီးဖြစ်သော 3.0 စံ။
"5G developer များအစလည်းသူတို့ရဲ့စံလက်မှတ်ထိုးဖို့၏အကောင်းဆုံးအလုပ်ပြုကြပြီ" သူကဆက်ပြောသည်။ "အတူတကွ, သူတို့ကအိမ်ပိုင်ရှင်နှင့်စားသုံးသူသူတို့လိုချင်တဲ့မြင်ကွင်း, အထူးသဖြင့်သူတို့ရဲ့အားကစားပေးနိုင်ပါသည်။
အဆိုပါ 2018 Mobile World Congress တွင် (MWC) မှာဆက်သွယ်ရေးဝန်ဆောင်မှုကုမ္ပဏီများမကြာသေးမီကသူတို့ 5G နည်းပညာ 50 စျေးကွက်များတွင်တပ်ဖြန့်ရပါလိမ့်မယ်ကြေညာခဲ့သည်။ တကယ်တော့, Verizon ကဒီအတိတ်တစ်လလေးစျေးကွက်ဖွင့်ဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့် Ericsson က ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစျေးကွက်၏ 10 + ရာခိုင်နှုန်းကို5အားဖြင့် 2020G-enabled ဖြစ်မည်အကြောင်းခန့်မှန်းချက်။
"ဒီနှစ်ခု, Ultra-မြန်နှုန်းမြင့် streaming များအဘို့အစိုင်အခဲပလက်ဖောင်းပေးသွားမှာပါ" McLennan ကဆိုသည်။
"Sinclair, ပုလဲနှင့်အများအပြားတွင်နိုင်ငံတကာထုတ်လွှင့်နေပြီအကြီးရလဒ်များကိုနှင့်အတူ ATSC ဝန်ဆောင်မှုချထားခဲ့ကြပြီးပိုပြီးပထမဆုံးအကြိမ်ထုတ်ဝေရောင်းချခြင်းအဘို့ဤတနှစ်နှင့်လာမည့်စီစဉ်ထားနေကြတယ်။ " သူကမှတ်ချက်ပြု
မြန်နှုန်းလျှံ - အင်တာနက်နီးပါးကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအသုံးပြုနိုင်စွမ်းနှင့်မိုဘိုင်းကွန်ရက်များကိုလျင်မြန်စွာတိုးချဲ့နှင့်အဆင့်မြှင့်ခံနှင့်အတူ, စားသုံးသူပိုမိုလွယ်ကူစွာသေမင်း၏နာကျင်ချည်ငင်ကြားခံဘီးမပါဘဲနက်ရှိုင်းသော, ကြွယ်ဝသောဖျော်ဖြေရေး, သတင်းနှင့်အားကစားကိုခံစားနိုင်ပါတယ်။
လွတ်သွားသောအချိန်လေး, ကွောချည်ငင်ကြားခံဘီး, သင်က streaming များဗီဒီယိုလုပ်ငန်းရင်ဆိုင်နေရတဲ့အကြီးမားဆုံးစိန်ခေါ်မှုတစ်ရပ်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်ကိုတွေ့မြင်မတိုင်မီအခြားသူတစ်ဦး၏မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် 1-5 စက္ကန့်ရောက်ရှိလာသောလုပ်ဆောင်ချက်, အကြောင်းအရာနှင့်အတူထပ်တူပြုခြင်းထဲကစကားသံကို - အောင်းနေချိန်။
အဆိုပါအောင်းနေချိန်အောက်ပိုင်း, ပိုကောင်းကိုကြည့်ရှုသူများအတွေ့အကြုံ, ဖောက်သည်ပိုစိတ်ကျေနပ်မှုနှင့်လျော့နည်းဖွယ်ရှိအားကစားဝါသနာအိုးဝေးကိုကလစ်နှိပ်ပါသို့မဟုတ်ဝန်ဆောင်မှုများကိုပြောင်းပါလိမ့်မယ်။
အဆိုပါ CDNs အားလုံးနှင့်ဟာ့ဒ်ဝဲ / software ကိုပံ့ပိုးပေး (သုညအနီး) Ultra-အနိမ့်မကယ်မလွှတ်ဖို့ကြိုးစားနေ on ရဲ့အောင်းနေချိန်စွမ်းဆောင်ရည်အာရုံစူးစိုက်နေကြ HD, UHD နှင့် 4K / HDR အကြောင်းအရာ။
သူတို့ဟာတသမတ်တည်းနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသောကြောင့်လုပ်နေတာ ... နှင့်နည်းပညာအသစ်နှင့်အတူကြောင့်ပင်ပိုကောင်းရလိမ့်မည်!
codec မြှင့်တင် - တိုးမြှင့်မှုများတဲ့အရေအတွက်က 4K / HDR အားကစားဖြစ်ရပ်များအဖြစ်ကောင်းစွာကဲ့သို့သောအခြား streaming များအဘို့ bandwidth ကို, ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်ဆွေးနွေးမှုလှုပ်ရှားမှုများအပါအဝင်အရည်အသွေးမြင့်ဗီဒီယို OTA ဖြန့်ဖြူး enable လုပ်ဖို့အရင်းအမြစ်အန်ကုဒ် / ဒီကုဒ်ဒါနည်းပညာနှင့်၎င်း၏ကွန်တိန်နာဖွင့်လှစ်ကြပြီ။
State-Of-The-Art encoding ကဖြေရှင်းချက်, V-Nova တူသောအထူးသဖြင့်ဖြေရှင်းချက်အဖြစ် Bitmovin, ATME နှင့်အခြားသူများ, ပြီးသားကဲ့သို့သောအားကစားကဗီဒီယိုကို formats ကိုထောကျပံ့ဖို့အသုံးပြုလျက်ရှိသည် HD, က Ultra HD 4K နှင့် 360 VR ။
သူတို့ကအစ HLS ဖွထောကျပံ့ (သည် HTTP တိုက်ရိုက်လွှ), HEVC (High အသုံးဗီဒီယို Coding) နှင့် MPEG-Dash (HTTP ကိုကျော် Dynamic အလိုက်လွှ) ။
သူတို့ထဲကအားလုံး (ကမဆို screen ပေါ်မှာကြည့်ရှုလူသတ်သမားကိုဆိုလိုသည်, ကျွန်တော်တို့ကိုယုံကြည်စိတ်ချ) အသစ်အမြင့်မား dynamic range ကို HDR pixels ကိုအတူတိုးမြှင့်ပြီ။
အဆိုပါရည်မှန်းချက် - အားလုံးအိုင်ပီ-ကယ်နှုတ်တော်မူ၏ပစ္စည်းများမှထုတ်လွှင့်-Level အတွေ့အကြုံကိုကယ်နှုတ်တော်မူခြင်းနှင့်တိုက်ရိုက်စားသုံးသူထိတွေ့ဆက်ဆံမှုများပိုမိုနက်ရှိုင်းအဆင့်ဆင့်ကိုမောင်း။ ထိုကဲ့သို့သော Net ကဝိပဿနာရဲ့ Sye အဖြစ်ဖြေရှင်းချက်လွယ်ကူခြား device ကိုလှုပ်ရှားမှုများပျော်မွေ့စေ - ထို2အပေါ်ကြီးမားတဲ့ screen ပေါ်မှာအဖြစ်အပျက်, အနီးကပ် / နောက်ခံnd အဆိုပါ3အပေါ်မျက်နှာပြင်နှင့်စာသား / Tweetrd တစ်ချိန်တည်းမှာမျက်နှာပြင်။
multitask - ကို "ကြီးမားသောဂိမ်း" နေဆဲတီဗီဖန်သားပြင်ပေါ်မှာကြည့်ရှုအားပေးစေခြင်းငှါနေစဉ်, ကြည့်ရှုတိုးလုပ်ဆောင်ချက်နှင့်ပတ်သက်ပြီးသတင်း / သတင်းအချက်အလက်ဖလှယ်ခြင်းနှင့်ပင်ကွဲပြားခြားနားသောအမြင်များနှင့်သင်တန်းသားများ၏အနီးကပ်စောင့်ကြည့်ဖို့ကိုသူတို့ကအခြားဖန်သားပြင်ကိုအသုံးပြုနေပါတယ်။ အဆိုပါသန့်စင်အကြောင်းအရာဂိမ်းနှင့်တစ်ဦးချင်းစီအဖွဲ့စားသုံးသူမှတန်ဖိုးတိုးပွားစေပါသည်။
ဒါရိုက်တာ Woody Woodhall, မဟာမိတ် Post ကိုဥက္ကဋ္ဌတစ်ဦးရုပ်ရှင်၏အသံလမ်းကြောင်းတို့သည်ကြီးစွာသောရုပ်ရှင်၏အရေးအပါဆုံးနှင့် underrated, ဖန်တီးမှုရှုထောင့်ကြောင်းလွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းများစွာကငါ့ကိုသို့တူး။
ဒါဟာဖြစ်ကောင်း ပို. ပင်အရေးကြီးသောတကယ်လုံးဝရွေးချယ်မှုဟာသူတို့ရဲ့အားကစားဖြစ်ရပ်အတွက်ဗတ္တိဇံကိုခံရဖို့လိုခငျြသူမြားကလူအဘို့ဖြစ်၏။
သူကဝန်ခံသည်အားကစားရဲ့အကောင်းဆုံးအစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်တစ်တင်းနစ်ဘောလုံးကိုဆန့်ကျင်နေတဲ့ရက်ကက်နှစ်ခု NASCAR ယာဉ်များ၏ဆက်သွယ်မှုသို့မဟုတ်များ၏အမှိုက်ဆွေးနွေးချက်၏ thunk ကပိုက်ကွန်သို့ futbol ၏ swish တစ် linebacker ၏ထိခိုက်ခံစားရဲ့ရှိမရှိအသံဖိုင်ဖြစ်ပါသည် LeBron နှင့် Draymond ။
အသံမပါဘဲ, အားကစားပါလိမ့်မယ် ... boring!
က Dolby Atmos တစ်ခုသို့မဟုတ်ယေဘုယျအသံ codec င်ပဲဖြစ်ဖြစ်, ကန့် HD, UHD, 3D သို့မဟုတ်သင်စောင့်ရှောက်ကြောင့်စွဲငြိဖွယ်ရာအသံသည် "ဟုအဆိုပါဂိမ်းထဲမှာ။ "
ခိုးကူး - အားကစားဖြစ်ရပ်များနှင့်လှုပ်ရှားမှုများ၏ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲတရားမဝင်ဖြန့်ဖြူးနှစ်စဉ်အားကစား franchise, ဖြစ်ရပ်များနှင့်အသင်းများကို $ 9B သလောက်ကုန်ကျခဲ့ပါတယ်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, ပင်လယ်ဓားပြက်ဘ်ဆိုက်များကိုလည်း၎င်းတို့၏ကြည့်ရှု malware နဲ့ဝိသေသလက္ခဏာခိုးယူတူသောအင်္ဂါရပ်တွေကဆက်ပြောသည်သည်။
အဆိုးဆုံး streaming များအားကစား၏တစ်စိတ်တစ်ဒေသ (နှင့်ဗီဒီယိုအကြောင်းအရာ) ပင်လယ်ဓားပြဖြစ်ပါတယ်။
ရုရှား၌ဘောလုံးရဲ့ကမ္ဘာ့ဖလား 2,637 ပင်လယ်ဓားပြက Facebook, Youtube, Twitch နှင့် Periscope အပေါ် semifinals အဘို့အစီးခဲ့သည်။ နီးပါး 30M အမြင်များနှင့် 3,653M အမြင်များထက်ပိုအတူပြင်သစ်-ခရိုအေးရှားဗိုလ်လုပွဲ၏ 60 စီးရှိခဲ့သည်။
"ကျုံ့" (စာရင်းပျောက်ကွယ်) ဖီဖာကုန်ကျခြင်းနှင့်တရားဝင်အခွင့်အရေးများသန်းပေါင်းများစွာလုံခြုံသောသူတို့အားတကား!
ဟုတ်ပါတယ်, အခွင့်အရေးကိုပိုင်ရှင်တွေတိကျစွာညာဘက်ချ IP address ကိုရန်ပြစ်မှုကျူးလွန်သူကိုအတိအကျရှာရန်နိုင်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်စည်းမျဉ်းဖောက်ပြန်တဲ့ဗီဒီယိုများချယူမှသူတို့ကိုမေးဝက်ဘ်ဆိုဒ်များမှသတိပေးချက်များပေးပို့ဖို့မူပိုင်ခွင့်ပိုင်ရှင်တွေလိုအပ်သည်။
ကံကောင်းထောက်မစွာ, တစ်ဦးကြံ့ခိုင်လုံခြုံရေးပလက်ဖောင်းရှိပြီးတရားလိုအပ်ပါသည်ရှေ့တော်၌ထိုအားကစားကြည့်ရှုနဲ့ content ပိုင်ရှင်တွေကာကွယ်ပေးနိုင်သည့် NAGRA ခြင်းဖြင့်မိတ်ဆက်ကဲ့သို့ tools တွေရှိပါတယ်။
"ပျမ်းမျှအားကစားဇှတျထိုးသမား, အဖြစ်အပျက်ပင်လယ်ဓားပြတစ်ဦး victimless ရာဇဝတ်မှုစဉ်းစားပါလိမ့်မယ်" McLennan မှတ်ချက်ချ, "ဒါပေမဲ့ဒီအတော်ကြာအဆင့်ဆင့်အပေါ်မမှန်ကန်ပါ။
ခိုးမှု - ပင်လယ်ဓားပြဆိုဒ်များပုံမှန်တန်ဖိုးနည်းသို့မဟုတ်အဆိုပါကမ္ဘာ့ဖလားအမေရိကန်ပွင့်လင်း, Super Bowl, နှင်းဆီ Bowl နှင့်ပင်အထက်တန်းကျောင်းပြိုင်ပွဲကနေအထိအားကစားလုပ်ဆောင်ချက် "အခမဲ့" ကြည့်ရှုပူဇော်; ပိုင်ရှင်များထက်လျော့နည်းအရည်အသွေးနှင့်သစ္စာနှင့်အတူအများအားဖြင့်, စပွန်ဆာမကယ်မလွှတ်ချင်တယ်။
"ဘာကြောင့်လူနားလည်သဘောပေါက်ကြဘူး, သူတို့ခိုးကူးအားကစားခံစားနေဖြင့် ပို. အန္တရာယ်ဖြစ်ပါတယ်" McLennan အလေးပေးပြောကြားခဲ့သည်။ "ဒီတရားမဝင်စီးကိုလည်း malware များ, cybertheft ကြော်ငြာတွေနှင့်စျေးပေါအားကစားဖြစ်ရပ်အလားအလာစျေးကြီးစေနိုင်သည်အခြားရာဇဝတ်မှုလှုပ်ရှားမှုများနဲ့တူ '' ကဆက်ပြောသည် features တွေ '' တို့ပါဝင်သည်။ "
bandwidth ကိုနှင့်နည်းပညာ၏ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာရရှိနိုင်မှုကို real-time သို့မဟုတ်သည့်အခါကဝါသနာအိုးများအတွက်အဆင်ပြေမယ့်အတွက်မဆို screen ပေါ်မှာကြည့်ရှုအားပေးနိုင်ပါသည်အားကစားများကဲ့သို့အရည်အသွေးမြင့်အကြောင်းအရာနီးပါးချက်ချင်းဂီယာနိုင်ပါတယ်။
ပို. ပို. , အားကစား franchise, စပွန်ဆာများနှင့်အားကစားသမားများအလွန်စားသုံးသူ-ဖော်ရွေစျေးနှုန်းမှာဒေသခံဒေသဆိုင်ရာ, အမျိုးသားရေးနှင့်ဒေသခံဖြစ်ရပ်များနှင့်လှုပ်ရှားမှုများကယ်နှုတ်ခြင်းငှါသူတို့ရရှိနိုင်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ကိရိယာများနှင့်ဖြေရှင်းနည်းများရှိသည်။
အဓိကအသေးစားနှင့်နယ်ပယ်အားကစားအားကစား streaming များ ပို. ပို. တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားသောအမှတ်တံဆိပ်စကားသံကိုတည်ဆောက်ရန်နှင့်ပေါ့ပေါ့သို့မဟုတ်ဇှတျထိုးသမားပရိတ်သတ်တွေနဲ့ကြည့်ရှုရန်တုံ့ပြန်မှုဖြစ်ဖို့အခွင့်အလမ်းရှိသည်။
ဒစ်ဂျစ်တယ် OTT streaming များနှင့်အတူကြည့်ရှုသာအဖြစ်စိတ်ကူးစိတ်သန်း-ရှည်လျားသူတို့ကရှုပ်ထွေးစေဘူးအဖြစ်လူမှုအသိုင်းအဝိုင်း '' အားဖြင့်ကန့်သတ်ထားကြောင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုကြီးထွားလာခင်းကျင်းနှင့်အတူပိုမိုလွယ်ကူစွာရနိုင်ပါ။
မည်သူမျှ "Lou အဘိဓါန်ဘတ်အားပြုသကဲ့သို့သူတို့ကိုပြန်လည်ညွှန်ကြားချက်ပြန်လုပ်မှကြည့်ရှုသူနိူးလိုလားသငျသညျအဖြစ်အတူတူ! သင်နဲ့အတူတူဖြစ်တယ်! ငါကားအဘယ်သူမှဘောလုံးကိုပစ်။ အကြင်သူသည်ကဘောလုံးကိုပြန်လည်ရုပ်သိမ်းသွားခဲ့သည်နှင့်ကောင်လေးဒုတိယဆက်သွယ်ပေးထားသည်။ အဘယ်သူသည်ဘောလုံးကိုထယူလိုက်တယ်နှင့်အဘယျသို့ကလှဲ။ , အဘယ်သို့ငါကပစ်ကိုသိမထားပါနဲ့။ ငါမနက်ဖြန်, Triple play စကပြန်ပစ်ကိုသိမထားပါနဲ့။ နောက်ထပ်ကောင်လေးထရရှိသွားတဲ့နှင့်သောကြောင့်တစ်ဦးရှည်လျားသောယင်ကောင်ဘောလုံးကိုတာမျိုး။ အဘယ်ကြောင့်? ငါမသိဘူး! သူကတတိယအပေါ်င်ငါအဲသည်မပေးပါဘူး! "
Multigenerational လုပ်သားအရေးပါသောသို့သော်အာရုံစူးစိုက်မှုလိုအပ်တာလဲ, ပံ့ပိုးမှု - ဒီဇင်ဘာလတွင် 26, 2018
ဂရိတ်ဗီဒီယို Talent နှင့်အစာရှောင်ခြင်း, ယုံကြည်စိတ်ချသိုလှောင်အများကြီးလိုအပ်သည် - ဒီဇင်ဘာလတွင် 19, 2018
စုစုပေါင်းဗီဒီယိုဂေဟစနစ်များအတွက်အခွင့်အလမ်းများတိုးချဲ့ - နိုဝင်ဘာလ 28, 2018
ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ အထောက်အပံ့ isovideo, viarte, HDR, ဆူညံသံလျှော့ချရေး, HDR / WCG, HEVC / AVC, HEVC, JCT-VC ကို, 2015, ဘစ်နှုန်းလျှော့ချရေး, စွဲငြိဖွယ်ရာ, UHD / 4K / HD ကို H264 / H265, ဝါဆော OTT SoftAtHome, MStar, CES2017 လှံ & Arrows စာတန်းထိုး, ဒစ်ဂျစ်တယ် Nirvana, မီဒီယာစောင့်ကြည့်ရေး, IBC တီဗီနည်းပညာ က Ultra HD ဖိုရမ် ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ် virtual reality	2018-11-07
ယခင်: ကိုယ်တိုင်ရေးလက်မှတ် Ed Sheeran '' Divide '' Tour FOR FREESPEAK II ကို wireless comm အဖြေ, ကယ်တင်တတ်၏
နောက်တစ်ခု: FilmLight အင်တာမီလန်ပျား 2018 မှာဂျပန်ဖန်တီးမှုအသိုင်းအဝိုင်းမှကတိကဝတ်ထှနျးလငျးပေးပါ
Archives လကိုရွေးချယ်ပါ မေလ 2019 (210) ဧပြီလ 2019 (503) မတ်လ 2019 (622) ဖေဖော်ဝါရီလ 2019 (325) ဇန်နဝါရီလ 2019 (280) ဒီဇင်ဘာလ 2018 (243) နိုဝင်ဘာလ 2018 (406) အောက်တိုဘာလ 2018 (496) စက်တင်ဘာလ 2018 (495) သြဂုတ်လ 2018 (397) ဇူလိုင်လ 2018 (876) ဇွန်လ 2018 (869) မေလ 2018 (871) ဧပြီလ 2018 (831) မတ်လ 2018 (779) ဖေဖော်ဝါရီလ 2018 (684) ဇန်နဝါရီလ 2018 (605) ဒီဇင်ဘာလ 2017 (396) နိုဝင်ဘာလ 2017 (712) အောက်တိုဘာလ 2017 (835) စက်တင်ဘာလ 2017 (608) သြဂုတ်လ 2017 (583) ဇူလိုင်လ 2017 (710) ဇွန်လ 2017 (543) မေလ 2017 (621) ဧပြီလ 2017 (695) မတ်လ 2017 (704) ဖေဖော်ဝါရီလ 2017 (340) ဇန်နဝါရီလ 2017 (364) ဒီဇင်ဘာလ 2016 (606) နိုဝင်ဘာလ 2016 (344) အောက်တိုဘာလ 2016 (556) စက်တင်ဘာလ 2016 (622) သြဂုတ်လ 2016 (1056) ဇူလိုင်လ 2016 (532) ဇွန်လ 2016 (414) မေလ 2016 (505) ဧပြီလ 2016 (713) မတ်လ 2016 (743) ဖေဖော်ဝါရီလ 2016 (382) ဇန်နဝါရီလ 2016 (123) ဒီဇင်ဘာလ 2015 (357) နိုဝင်ဘာလ 2015 (327) အောက်တိုဘာလ 2015 (152) စက်တင်ဘာလ 2015 (259) သြဂုတ်လ 2015 (440) ဇူလိုင်လ 2015 (276) ဇွန်လ 2015 (140) မေလ 2015 (128) ဧပြီလ 2015 (435) မတ်လ 2015 (289) ဖေဖော်ဝါရီလ 2015 (298) ဇန်နဝါရီလ 2015 (131) ဒီဇင်ဘာလ 2014 (103) နိုဝင်ဘာလ 2014 (194) အောက်တိုဘာလ 2014 (149) စက်တင်ဘာလ 2014 (381) သြဂုတ်လ 2014 (250) ဇူလိုင်လ 2014 (287) ဇွန်လ 2014 (363) မေလ 2014 (231) ဧပြီလ 2014 (744) မတ်လ 2014 (560) ဖေဖော်ဝါရီလ 2014 (427) ဇန်နဝါရီလ 2014 (289) ဒီဇင်ဘာလ 2013 (137) နိုဝင်ဘာလ 2013 (545) အောက်တိုဘာလ 2013 (290) ဇူလိုင်လ 2013 (26) မေလ 2013 (13) ဧပြီလ 2013 (1) မတ်လ 2013 (2)0(306)